नेपाली कांग्रेसमा महामन्त्रीका आकांक्षीमा दोस्रो पुस्ताको बाहुल्य, को-को छन् दावेदार ? - Baikalpikkhabar
नेपाली कांग्रेसमा महामन्त्रीका आकांक्षीमा दोस्रो पुस्ताको बाहुल्य, को-को छन् दावेदार ?
झापा ,१५ भदौ / नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा संख्या ठूलै छ । मंसिर ९–१३ का लागि तय भएको १४ औं महाधिवेशन निर्धारित मितिमै हुने पक्कापक्की जस्तै भएपछि नेताहरुले उम्मेदवारी सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् । सभापतिका उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले शुक्रबार तामझामका साथ नयाँबानेश्वरस्थित एक बैंक्वेटमा सम्पर्क कार्यालय खोलेका थिए ।
कांग्रेसमा सभापतिपछि दोस्रो कार्यकारी पद हो, महामन्त्री । वरियतामा उपसभापति भन्दा तल भए पनि कांग्रेसमा महामन्त्री पद महत्वपूर्ण मानिन्छ । महाधिवेशनको समीकरण प्रष्ट नभएकाले धेरैले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छैनन् । तर महामन्त्रीका आकांक्षी नेताहरुको संख्या पनि ठूलै छ । महामन्त्रीका आकांक्षीमा दोस्रो पुस्ताको बाहुल्य छ । गगन थापा भने तेस्रो पुस्ताका नेता हुन् ।
अर्का दावेदार बालकृष्ण खाँण हुन् । नेविसंघ र तरुण दल दुवैको नेतृत्व गरेर केन्द्रीय राजनीतिमा आएका उनी संगठनमा बलियो पकड भएका नेतामध्ये एक हुन् । देउवा समूहबाट उनी महामन्त्रीका अर्का बलिया उम्मेदवार मानिन्छन् । तर गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर देउवाले महाधिवेशनको टिम व्यवस्थापनमा सहज बनाएको त होइन भन्ने चर्चा संस्थापन समूहमा छ ।
महामन्त्रीका अर्का दावेदार ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की हुन्, जसलाई देउवाले आफ्नो सरकारमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पनि बनाएका छन् । देउवा, विमलेन्द्र निधिपछि नेविसंघको अध्यक्ष बनेका उनलाई पनि मन्त्री बनाएर देउवाले टिम व्यवस्थापनमा सहज बनाएको त होइन भन्ने चर्चा छ ।
संस्थापन समूहबाट एनपी साउद र विश्वप्रकाश शर्मा पनि महामन्त्रीका आकांक्षी हुन् । नेविसंघको अध्यक्ष भइसकेका विश्वप्रकाशलाई देउवाले यो पटक प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएका थिए । कांग्रेसका युवा नेताहरु भनेर चिनिनेमध्ये उनी मात्र संस्थापन समूहमा भएकाले महामन्त्रीको उम्मेदवार बनाउनुपर्ने दबाब छ ।
संस्थापन समूहबाट महामन्त्रीका दावेदार एनपी साउद पनि नेविसंघको अध्यक्ष भइसकेका नेता हुन् ।
संस्थापन इतर समूहमा
संस्थापन इतर समूहमा भने सभापतिको तुलनामा महामन्त्रीमा उम्मेदवार कम छन् । यो समूहबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइराला सभापतिका उम्मेदवार छन् ।
जबकि महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका गगनसँगै डा. मिनेन्द्र रिजाल प्रमुख दावेदार हुन् । अघिल्लो महाधिवेशनमै महामन्त्रीमा लडेका थापा स्वाभाविक दावेदार हुन् ।
१३ औं महाधिवेशनमा सिटौला समूहबाट प्रतिस्पर्धा गरेको भए पनि थापा पनि यो पटक संस्थापनइतर समूहको साझा बन्ने प्रयासमा छन् । संस्थापनइतर समूहका हरेक सभापतिका दावेदारले थापालाई आफ्नाे टिममा राख्न चाहन्छन् ।
महामन्त्रीका अर्का प्रबल दावेदार हुन् डा. रिजाल । महामन्त्री डा. कोइराला निकट उनी संस्थापन समूहमा समन्वयकारी भूमिका खेल्ने नेताका रुपमा चिनिन्छन् ।
थापा र रिजालबाहेक चन्द्र भण्डारी, गुरु घिमिरे, प्रदीप पौडेल, धनराज गुरुङ लगायत पनि महामन्त्रीको आकांक्षी छन् । तर उनीहरुले घोषणा गरेका छैनन् ।
भण्डारी देउवा समूह छाडेर संस्थापनइतर समूहमा आएका नेता हुन् भने नेविसंघको अध्यक्ष र तरुण दलको महासचिव भइसकेका गुरुङको संगठनमा राम्रो प्रभाव छ । गुरु २०६२/६३ को आन्दोलनताका नेविसंघको नेतृत्व गरेर आएका नेता हुन् ।
महामन्त्रीका अर्का दावेदार पौडेल पनि नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष हुन् । कृष्ण सिटौला निकट उनले पछिल्लो समय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिमा बसेर काम गरेका थिए ।
मङ्गलबार, १५ भदौ, २०७८, बिहानको ०९:१७ बजे